ပင်မစာမျက်နာဖိတ်ခေါ်မယ်မိမိ၏စာမျက်နှာအဖွဲ့ဝင်များစည်းကမ်းချက်များအဖြူရောင်ပရဟိတပရဟိတ ၏ လေ့လာစရာ မာတိကာ(မျိုးချစ်မြန်မာ)ပရိတ်တရားတော်များမျိုးချစ်မြန်မာ(ဘန်ကောက်မှတ်သားစရာများပရဟိတ လှုတ်ရှားမှူ့အလှူဒါန ပွဲလမ်းသဘင်မှတ်တမ်း ဓာတ်ပုံများအထွေထွေဆရာတော် Facebookအရှင်ပဏ္ဍိတ(ဒေါင်းဖြူ)
ယနေ့ top 10 မိသားစုဝင်များ
Hassie Santellana Online
Top News · Everything Hassie Santellana, Derrick Qualls, Dorine Pfalzgraf and 44 more joined အဖြူရောင်အွန်လိုင်းပရဟိတအသင်3း minutes ago♥A D M I N♥Hlwan Lay(Admin) posted discussionsပေးဆပ်ခြင်းလူတိုင်း ဒီလိုပဲလားဟာနှုတ်ဆက်ထွက်ခွာရတော့မယ်34 minutes agoMyron Amarian postedastatus"http://refrigeratormagnets.jimdo.com/"37 minutes ago 0
♥A D M I N♥Hlwan Lay(Admin) replied to စိုင်းနောင်နောင်'s discussion နွေအိမ်မက်သို့.....တမ်းချင်း1 hour agoစိုင်းနောင်နောင် posted discussionsနွေအိမ်မက်သို့.....တမ်းချင်းမျက်ရည်စို့တဲ့......ညလမ်းခွဲသွားပါ........ရေပြာ3 more…1 hour ago♥A D M I N♥Hlwan Lay(Admin) commented on Ko Nay Linn's blog post Es File Explorer(for android)1 hour agoKo Nay Linn ဘလော့အသစ်တစ်ခုတင်ခဲ့သည်Es File Explorer(for android)1 hour ago 1
Super Bloggerသူရကိုကို leftacomment for ♠♠♠ ! **ဆုပန်** ! ♠♠♠1 hour agoBenita Deep postedastatus"http://brandrecon.com/2014/04/garber-heating-review/"1 hour ago 0
Super Bloggerသူရကိုကို leftacomment for ကြယ်စင်ဖြူ2 hours agoSuper Bloggerသူရကိုကို leftacomment for ဆိုဖီယာ2 hours agoElvis Dibley postedastatus"http://www.acayplastik.com/camasir-ipi/1/28/tum-urunler.aspx"3 hours ago 0
သက်ထား commented on Hlwan Lay(Admin)'s blog post ဆူးလေစေတီတော် သမိုင်းကြောင်း5 hours agoသက်ထား replied to စာဂဘ၀င်'s discussion မျှော်လင့်ချက်6 hours agoသက်ထား commented on +!!သစ်စာတော်လေး+!!'s blog post သူရေးခဲ့တဲ့ ကဗျာ6 hours agoသက်ထား leftacomment for မာနမင်းသာ6း hours agoSuper Bloggerသူရကိုကို သည်ဓာတ်ပုံတင်ခဲ့သည်4more…8 hours agoဂန်းအထူးဖွဲ့+♪♫♫ ဂျပိုး CleaN GanG ♪s♫p♫y ပုံအသစ်တင်ခဲ့သည် ရုံးမှဝန်ထမ်းများနှင့် အမှတ်တရ8 hours ago 0
Super Bloggerသူရကိုကို leftacomment for ♠♠♠ ! **ဆုပန်** ! ♠♠♠10 hours agoမောင်မိုးဆွေ commented on ★♥´☂`♥★ အသဲစား ကဝေ ★♥´☂`♥★'s blog post ငါ အသဲကွဲနေတာတဲ့လေ10 hours ago နောက်ထပ်ကြည့်မယ် RSS
Es File Explorer(for android)
Ko Nay Linn သည် April 24, 2014 တွင်ရေးသားခဲ့သည်.... 1 Comment
မောင်မိုးဆွေ သည် April 24, 2014 တွင်ရေးသားခဲ့သည်....2Comments
ChatAdmin ငါ အသဲကွဲနေတာတဲ့လေ
★♥´☂`♥★ အသဲစား ကဝေ ★♥´☂`♥★ သည် April 24, 2014 တွင်ရေးသားခဲ့သည်....4Comments
ဆိုဒ်အလှူရှင် ရေဝေးသုဿန်သမိုင်းကို ရိုက်ချိုးခဲ့သော ပြည်သူ့ဈာပနပွဲ - နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်)
Saw Kyaw Oo သည် April 24, 2014 တွင်ရေးသားခဲ့သည်.... 1 Comment
♥A D M I N♥ ဆူးလေစေတီတော် သမိုင်းကြောင်း
Hlwan Lay(Admin) သည် April 24, 2014 တွင်ရေးသားခဲ့သည်.... 1 Comment
♥A D M I N♥ Bladder Cancer ဆီးအိမ်-ကင်ဆာ
ဆိုဒ်အလှူရှင် ဘဘဦးဝင်းတင်၏နောက်ဆုံးခရီးမှတ်တမ်းတင်ပုံများ- ရိုက်ကူး အချစ်ချိုချဉ်
Saw Kyaw Oo သည် April 23, 2014 တွင်ရေးသားခဲ့သည်....2Comments
♥A D M I N♥ Allergic မထစေဖို့ နည်းလမ်းများ
Hlwan Lay(Admin) သည် April 23, 2014 တွင်ရေးသားခဲ့သည်.... 1 Comment
ဆိုဒ်အလှူရှင် မနက်ဖြန် ပြုလုပ်မည့် ဘဘ ဦးဝင်းတင် ၏ ဈာပန အခန်အနားသို့ လိုက်ပါလိုသူများ ဆက်သွယ်ရန်
Saw Kyaw Oo သည် April 22, 2014 တွင်ရေးသားခဲ့သည်....0Comments
♥A D M I N♥ သူရေးခဲ့တဲ့ ကဗျာ
+!!သစ်စာတော်လေး+!! သည် April 22, 2014 တွင်ရေးသားခဲ့သည်....2Comments
ဆိုဒ်အလှူရှင် ကမ္ဘာက စောင့်ကြည့်နေကြတဲ့ ဈာပနအခမ်းအနားကြီး - နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်)
ဆိုဒ်အလှူရှင် ဘဦးဝင်းတင် ၏ ဈာပနအခမ်းအနားပွဲသို့ အဖြူရောင်အွန်လိုင်း ပရဟိတအသင်းမှ လည်းသွားရောက် ဂါရဝပြု
facebook 10.0.0.0.8 (for android)
Ko Nay Linn သည် April 21, 2014 တွင်ရေးသားခဲ့သည်....0Comments
ဆိုဒ်အလှူရှင် ဦးဝင်းတင်အတွက် မော်ကျူရီ နယူးစ် - ကိုညို( အော်စလို)
Saw Kyaw Oo သည် April 21, 2014 တွင်ရေးသားခဲ့သည်....0Comments
မောင်မောင်အောင်နေနိုင်ဦး သည် April 21, 2014 တွင်ရေးသားခဲ့သည်.... 1 Comment
တစ္စေဖြူလေး(ဘုန်းပြည့်) သည် April 21, 2014 တွင်ရေးသားခဲ့သည်....2Comments
ဆိုဒ်အလှူရှင် ဒီမိုကရေစီ တိုက်ပွဲ မပြီးသေးခင် ခွဲခွာသွားခဲ့ရတဲ့ ဘဘ...ကောင်းသောဘုံဘ၀မှာ... အေးချမ်းစွာ ခိုနားပါတော့ ဘဘ။
Saw Kyaw Oo သည် April 21, 2014 တွင်ရေးသားခဲ့သည်.... 1 Comment
♥A D M I N♥ တောင်ကိုရီးယား သင်္ဘောပျက်ထဲ ဝင်နိုင်ပြီ
+!!သစ်စာတော်လေး+!! သည် April 20, 2014 တွင်ရေးသားခဲ့သည်....2Comments
♥A D M I N♥ Grand Royal မဏ္ဍပ်ကို အမည်ပျက် စာရင်းသွင်း
+!!သစ်စာတော်လေး+!! သည် April 20, 2014 တွင်ရေးသားခဲ့သည်....4Comments
ဆိုဒ်အလှူရှင် နည်းပညာ လောက ကိုရော လူ့ဘောင်အတွင်းကပါ ရုန်းထွက်သွားနှိုင်တဲ့ အထူးဘလော့ဂ်ဂါ အောင်အောင်( မ.က.စ)
Saw Kyaw Oo သည် April 20, 2014 တွင်ရေးသားခဲ့သည်....3Comments
♥A D M I N♥
တင်ခဲ့သူ Hlwan Lay(Admin) in အထူး ဘလော့ဂါ 34 minutes ago.0Replies
တင်ခဲ့သူ Hlwan Lay(Admin) in အထူး ဘလော့ဂါ 56 minutes ago.0Replies
တင်ခဲ့သူ စိုင်းနောင်နောင် in အထူး ဘလော့ဂါ. Last reply by Hlwan Lay(Admin) 1 hour ago. 1 Reply
တင်ခဲ့သူ စာဂဘ၀င် in အထူး ဘလော့ဂါ. Last reply by သက်ထာ6းhours ago.5Replies
တင်ခဲ့သူ စာဂဘ၀င် in အထူး ဘလော့ဂါ. Last reply by ++ မေယုံလေး ++ 14 hours ago.4Replies
တင်ခဲ့သူ စိုင်းနောင်နောင် in အထူး ဘလော့ဂါ. Last reply by ++ မေယုံလေး ++ 17 hours ago.2Replies
တင်ခဲ့သူ စိုင်းနောင်နောင် in အထူး ဘလော့ဂါ. Last reply by တယောချို 21 hours ago.3Replies
တင်ခဲ့သူ စိုင်းနောင်နောင် in အထူး ဘလော့ဂါ 21 hours ago.0Replies
တင်ခဲ့သူ စိုင်းနောင်နောင် in အထူး ဘလော့ဂါ 22 hours ago.0Replies
တင်ခဲ့သူ ဇလပ်နွယ် in အထူး ဘလော့ဂါ. Last reply by cherrykhin မနေ.က.2Replies
တင်ခဲ့သူ +**+ဆွေး(ကောင်လေး)+**+ in အထူး ဘလော့ဂါ. Last reply by လင်းထက်သာ on Tuesday.5Replies
တင်ခဲ့သူ ရင်ခါးခါး in အထူး ဘလော့ဂါ. Last reply by အိအိချိူ on Monday.3Replies
`ချစ်သူ မဟုတ်တဲ့ ချစ်သူ´
တင်ခဲ့သူ ရင်ခါးခါး in အထူး ဘလော့ဂါ. Last reply by သက်ထား on Monday.5Replies
တင်ခဲ့သူ ရင်ခါးခါး in အထူး ဘလော့ဂါ. Last reply by သူရကိုကို Apr 18.2Replies
Saw Kyaw Oo Video တင်ဆက်သူ Saw Kyaw Oo0Comments
မြန်မာ ပြည်ေ၇ာင်းရန်မဟုတ် တင်ဆက်သူ Saw Kyaw Oo 1 Comment
မျော်လင့် စောင့် စား ၂၀၁၅ တင်ဆက်သူ Saw Kyaw Oo0Comments
ဦးကပ်စီးနဲ့ ဒေါ်ဖွာလန် တင်ဆက်သူ ACE.ဇင်မင်းစိုး0Comments
မြန်မာပြည်မှာ တင်ဆက်သူ Saw Kyaw Oo 1 Comment
တွန်းပါ တင်ဆက်သူ Saw Kyaw Oo0Comments
2014 မင်္ဂလာဒိုး ၂ မီးစာတဖက် ရေမှုတ်တဖက် တင်ဆက်သူ Saw Kyaw Oo0Comments
စစ်တပ်သမိုင်း တင်ဆက်သူ Saw Kyaw Oo0Comments
အလုပ်လုပ်နေပါသည်ခဏစောင့်ပါ ဆိုက်တွင်ရှိသော အချက်လက်များ
ZipZapt & Air Air
ရတနာမြိုင်သင်္ကြန် - ၂
AUNG YE` HTIKE
Flash Song နည်းပညာ အပိုင်း (၁)
Flash Song နည်းပညာ အပိုင်း (၂)
နည်းပညာ အပိုင်း (၃)
နည်းပညာ အပိုင်း (၄)
အလှူငွေ - 100000 သိန်း
ဆွမ်းလောင်းပွဲတွက် - 50000 သိန်း
နော်ဝေနိုင်ငံမှ Ronald Myint Kyaw
+!!!♫ ★♥ ဂျွန် ♥*★♫!!+
လက်ဆောင်ပေးရန် ♥♥ kk ♥♥
လက်ဆောင်ပေးရန် nyi myat khine
လက်ဆောင်ပေးရန် nay ye
အလုပ်လုပ်နေပါသည်ခဏစောင့်ပါ ဓာတ်ပုံများ အသစ်ထည့်ရန်
© 2014 တည်ထောင်သူ အဖြူရောင်နတ်သား. Powered by